मोरङमा माओवादीको किल्ला ढ'ल्यो सिंगो गाउँ नै एमालेमा प्रवेश ! - Reel Mandu
मोरङमा माओवादीको किल्ला ढ’ल्यो सिंगो गाउँ नै एमालेमा प्रवेश !
काठमाडौं। पार्टीको कुनै एजेन्डा नभएको भन्दै नेकपा(माओवादी) पार्टी परित्याग गर्दै मोरङको कानेपोखरीमा सिंगो गाउँ नै एमालेमा समाहित भएका छन् । शनिबार नेकापा एमाले कानेपोखरी ४ नम्बर वडा कमिटीको विस्तारित बैठकमा नारायण चोक, नर्सरी टोल,मिलन चोक, पिङ्डाँडा, हस्तिनापुरका दुई दर्जन माओवादी नेताहरु एमालेमा समाहित भएको हो ।
उनिहरुलाई कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि र अतिथिहरुले खदा ओढाएर स्वागत गरेका थिए । समाहित हुने माओवादी पार्टीका जिल्ला कमिटि सदस्य, गाउँ कमिटि सचिवलाय सदस्य र वडा कमिटि सचिवलाय सदस्यहरु रहेका छन् ।
यस अघि नेपाल कम्युनिष्ट(नेकपा)पार्टी बाट एमाले र माओवादी अलग हुदा गाउँ कमिटिमा जिम्मेवार प्राप्त गरेका चित्रबहादुर राई, डम्बर कटुबाल र टेक बहादुर तामाङ भने एमालेमै बसेर पार्टीका गतिविधिहरु गर्दै आएका थिए । टेक बहादुर तामाङ भने गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादी पाटीबाट ४ नं. वडामा वडाध्यक्ष उमेद्वार हुन ।
उदिप लिम्बुको नेतृत्वमा चमक बहादुर कार्की, यामबहादुर कार्की, राम बहादुर खड्का, भादुलाल चौधरी, कमला मगर, ज्ञान बहादुर मगर, सिचाई माझी, इन्दिरा राई(गीता), सुनिल लिम्बु, सुरेश गुरुङ, खम्बरसिंह कटुवाल, लक्षमण कार्की, गंगा मगर, पदम कटुवाल, मन कुमारी माझी, फुलमाया माझी, सन्तकुमार राजबंशी, बालकृष्ण घोरसाई, विरवहादुर बम्जन, विमला कटुवाल गलाएत रहेका छन् ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि एमाले प्रदेश १ सदस्य डिपी राई, विषेश अतिथि क्षेत्र नं. ३ ख, का सांसद तथा पूर्व राज्य मन्त्री राजकुमार ओझा, अतिथि एमाले जिल्ला कमिटि सचिवलाय सदस्य तथा गाउँपालिका उपाध्यक्ष राजमती इङ्नाम, एमाले जिल्ला सदस्य भोला अधिकारी, गाउँ कमिटि सहसंयोजक सुशिल बुढाथोकी, एमाले कानेपोखरी गाउँकमिटि अध्यक्ष दानबहादुर बस्नेत र राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल केन्द्रिय सचिवलाय सदस्य तथा मोरङ जिल्ला अध्यक्ष नविन पौडेल, राष्ट्रिय खेलकुद महासंघ केन्द्रिय सदस्य तथा वडा नं. ६ का अध्यक्ष कुमार फुयल, अखिल नेपाल महिला संघ कानेपोखरी गाउँ कमिटि अध्यक्ष मुना श्रेष्ठ, राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल कानेपोखरी गाउँकमिटिका संयोजक अशोक फुयल लगाएतले स्वागत गरेका थिए । कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष दिनेश सुब्बाको अध्यक्षतामा भएको थियो । त्यसैगरी सचिव इश्वरी बस्नेतले कार्यक्रम संचालन गरेका थिए ।
काठमाडौँ – नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको बैठक सकिएको छ । बैठकले मन्त्रीबन्नेहरुको टुंङ्गो लगाएको छ । नेकपा एमाले विभाजन गरेर बनेको नेकपा एकिकृत समाजवादीबाट सरकारमा सहभागी हुनेहरुको लिष्ट तयार भएको हो ।
सरकार बनेको लामो समयसम्म पनि मन्त्रीपरिषदले पुर्णता पाउन नसक्दा ओलोचित भएको देउवा सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएर भोलीनै मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्ने तयारी गरेको बुझीएको छ ।
माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले विरोध खतिवडाको नेतृत्वमा सरकारमा जाने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा एकीकृत समाजवादीले खतिवडाको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने तयारी गरेको एक नेताले बताए।
एकीकृत समाजवादी पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफ्नो पार्टीका तर्फबाट मन्त्री हुनेको लिष्ट बुझाइसकेको ती नेताको दाबी छ। यसैगरी, मन्त्री हुनेमा मेटमणि चौधरी, रामकुमारी झाँक्री, प्रेम आले, जीवनराम श्रेष्ठ छन्।
यस्तै, भवानी खापुङ र किसान श्रेष्ठमध्ये एक जना मन्त्री बन्ने ती नेताले बताए। कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीसहित सात मन्त्रालय राखेको छ भने एकीकृत समाजवादीलाई ६ मन्त्रालय भागवण्डा परेको छ। तर, कुन मन्त्रालयमा को जाने भन्ने चाहिँ टुंगो नलागेको ती नेताले बताए।
आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्ने तयारी छ। खारेज भएको सिफारिस राष्ट्रपतिले जारी गरे लगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने भएको छ। मंगलबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने नेताहरुले बताएका छन्।